Soomaaliya oo si buuxda looga ciiday, iyada oo ay jirto cabsi cudurka COVID19 - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Soomaaliya oo si buuxda looga ciiday, iyada oo ay jirto cabsi cudurka...
Soomaaliya oo si buuxda looga ciiday, iyada oo ay jirto cabsi cudurka COVID19
Guud ahan Gobolada dalka ayaa intooda badan aaka si weyn looga ciiday, isad oo salaada ciida lagu tukaday goobo fagaare ah. Shacabka magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa saaka si weyn ugu dabaaldegay maalinta 1-aad ee munaasabada Ciidul adxaa oo ku beegan maanta, iyadoo fantasiye balaaran oo arintaas ku saabsan laga dareemayo caasimada.
Waxaadna maanta ku arkaysa magaalada, dadweyne iskugu jira rag, dumar iyo caruur, ayaa saaka markii uu waagu baryey u dareeray masaajida iyo goobo kale, si ay ugu soo tukadaan salaada ciidul adxaa. Masuuliyiin ka tirsan dowlada Somalia ayaa boqolaal shacab ah kula tukaday masaajidka Isbaheysiga Islaamka oo ku dhow xarunta madaxtooyada, waxaana wadooyinka gala masaajidka saaka xiray ciidamada booliska oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka si ay amaanka u sugaan, iyadoo dadka masaajidka galaya si adag loo baarayey.
Markii salaada la tuesday ka dib ayaa waxaa wadooyinka magaalada Muqdisho isugu soo baxay dadweyne fara badan oo isugu jira rag, haween iyo caruur intooda badan ku lebisan dhar qurux badan oo noocyo kala duwan leh kuwaasoo isku booqanaya guryaha iyagoo iskugu hambalyeynaya munasabada ciida, waxaana maanta oo kale si aad ah la isugu soo dhoweeyaa macmacaano kala duwan oo loogu talo galay munaasabada ciida sida Xalwada, buskutka, doolshaha iwm.
Previous articleMW Axmad Madoobe oo ku sugan Nairobi oo fartiin ciida u diray shacabka Soomaaliyed
Next articleGuri ku yaal Muqdisho oo dab xoogan ka kacay